8 Xaqiiqo Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Oo Ku Saabsan Isku Aadka Wareega 8 CL %
Isku aadka wareega Sideed dhamaadka tartanka xiisaha leh ee Champions League, ayaa la sameeyay, waxaana kasoo baxay kulamo waa weyn.
Kooxaha ayaa waxay isku aadeen sidaan soo socoto: Barcelona vs AS Roma, Real Madrid vs Juventus, Bayern Munich vs Sevilla, Man City vs Liverpool.
Hadaba, waxaan halkaan hoose aan idin kugu soo gudbin doonaa dhamaan waxyaabihii laga diiwaan geliyay isku aadka wareega 8-da tartanka Champions League.
Manchester City ayaa waxay noqoneysaa kooxdii todobaad ee reer England ah, taasoo Liverpool uwajahda tartamada Yurub, kadib Leeds United, Tottenham Hotspur, Nottingham Forest, Chelsea, Arsenal and Manchester United.
Kulanka udhaxeeya Liverpool iyo Manchester City ayaa wuxuu noqonayaa midkii ugu horeeya ee kooxo England ka dhisan ay isku wajahaan wareega Sideed dhamaadka Champions League tan iyo xagaagii 2010/11, markaasoo Chelsea iyo Man Utd ay wada dheeleen.
Jurgen Klopp ayaa wuxuu yahay macalinka kaliya ee Pep Guardiola ku garaacay Shan tartan oo kala duwan dhamaan tartamada oo dhan wuxuu ka badan yahay macalimiinta kale, ee uu horey usoo wajahay hogaamiyaha Sky Blues.
Real Madrid iyo Juventus ayaa waxay isku arkayaan tartanka Champions League sanadkii labaad oo xiriir ah, maadaama xili ciyaareedkii hore oo ay Real Madrid ku guuleystay ay isku wajaheen Final-ka Dhaga-weyne.
Real ayaa laga soo reebayey Champions League afartii jeer ee ugu dambeysay oo ay wajahado Juventus [marka laga reebo Final-ka] – Saddex jeer lugta labaad oo Talyaaniga ka dhacday iyo hal jeer oo lugta labaad oo Spain – Markii ugu dambeysay waxay ahayd sanadkii 2015 [1-1 ayay ku kala baxeen xili Bernabéu la joogay].
Kooxda Sevilla waa mida kale ee kamid ah Sideeda koox ee joogta wareega Sideed dhamaadka, taasoo aanan horey ula soo dheelin dhamaan tartamada Yurub ee heerka kooxeed ah – Balse hadda ayay markoodii ugu horeysay iswajahayaan
Barcelona iyo AS Roma ayaa kala badiyay min hal jeer labadda kale bareejo ayay galeen afartii kulan ee ugu dambeysay oo ay isku arkaan Champions League – Markii ugu dambeysay Barca ayaa 6-1 ku badisay ciyaar dhacday 2015/2016.
Marka dhanka kale laga eego dhamaan tartamada oo dhan Barcelona ayaa badisay Labo jeer Shan kulan oo ay wajahaday Roma, waxayna dheer tahay ciyaar saaxiibtinimo taasoo dhacday sanadkii 2015, markaasoo kooxda reer Italy lagu soo dhar-baaxay 3-0.